Somali News 10.01.21
Published October 2, 2021 at 11:45 AM CDT
Xaakim ayaa ku xukumay nin u dhashay South Carolina inuu hooyadii tooreey ku dilay sanadkii hore magaalada Sioux. Paul Belk waxaa lagu xukumay dil darajada labaad ah geerida hooyadiis Lisa bishii Abriil ee 2020. Belk wuxuu galay difaac waali ah. Garsooraha ayaa xukumay in Belk uusan waalnayn markii uu dilay hooyadii laakiin isticmaalka marijuana uu uga sii daray xanuunka dhimirka.
Ciidanka Ilaalada Gobolka Iowa ayaa si buuxda u soo bixi doona dhammaadka toddobaadkan si ay isugu dayaan inay isku dayaan inay yareeyaan tirada dadka ku dhimanaya waddooyinka Iowa. Roondooyinka waxaa la qorsheeyay Sabtida ilaa Isniinta. Meel -marinta ayaa diiradda saari doonta wadista mashquulsan.
Sahan cusub oo bille ah oo lagu sameeyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga sagaal gobol oo Midwest iyo Plains, oo ay ku jirto Siouxland, ayaa muujinaya kalsoonida dhaqaalaha lixda bilood ee soo socota oo hoos ugu dhacday heerkeedii ugu hooseeyay tan iyo markii masiibada COVID-19 ay billowday sannadkii hore.
Tusmada guud ee bisha Sebtember waxay hoos ugu dhacday 61.6 laga soo bilaabo bishii Ogost 68.9. Dhibco kasta oo ka sarreeya 50 ee tusmooyinka sahanka ayaa tilmaamaya koritaan.
Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Senate -ka Iowa Jack Whitver ayaa sheegay in mudanayaasha xisbiga Jamhuurigu aysan qaadan go’aan kama dambeys ah oo ku aaddan inay oggolaadaan ama diidaan jadwalka koowaad ee khariidadaha dib -u -habeynta ee la soo jeediyay.
Golaha Sharci dejintu wuxuu yeelanayaa kalfadhi gaar ah Talaadada.
Hoggaamiyeyaasha Dimuqraaddiga ayaa sheegaya inay u codeyn doonaan inay ansixiyaan jadwalka ugu horreeya ee soo -jeedinta sharci -dejinta iyo shirweynaha degmada.
Khariidadaha waxaa soo saaray Wakaalad
Somali News 09.30.21
Xogta la sii daayay Arbacadii ayaa soo jeedisay in Iowa laga yaabo inay dhinac u weeciso dagaalka ka dhanka ah COVID-19. New York Times ayaa werisay in…